I-Apple ibalaselisa unxibelelwano phakathi kwe-iPhone kunye ne-Apple Watch kwintengiso yayo entsha | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | | Apple Watch, iPhone
Los ntengiso ye-Big Apple ibisoloko ingumzekelo wemveliso emanyelwayo. Kukho abanye abamakishe ngaphambili nasemva, ngakumbi abo babhekisa kwiimveliso ezintsha ngemihla ethile enje ngeKrisimesi. Kuwo wonke unyaka kupapashwa amanye amabala amafutshane entengiso ajolise kuwo bonisa ezinye zeempawu eziphambili okanye ukhetho lweemveliso. Ipapashwe kutshanje yiApple ibhekisa kwi Unxibelelwano olubalulekileyo phakathi kwe-iPhone kunye neApple Watch. Olu nxibelelwano luququzelela imisebenzi ethile enokwenzeka fumana iwotshi elahlekileyo, liziko lecebo lentengiso entsha.
Fumana umbulelo wakho we-iPhone kwi-Apple Watch: isibhengezo esitsha se-Apple
I-iPhone elahlekileyo ifunyanwa ngokulula. Hlaziya, yi-iPhone + Apple Watch.
Isibhengezo sibonisa indoda yelizwe ebinosuku olude lokuqokelela ingca. Ufika ekhaya kwaye akayifumani ifowuni yakhe kodwa kuye kwenzeka ukuba aye kwimfumba yomququ kwaye ajonge ukuba iwotshi yakho inxibelelana ne-iPhone. Njengoko idibanisa, oko kubonisa ukuba isixhobo kufuneka sisondele. Ke ngoko, yenza umsebenzi we 'Fumana i-iPhone' kwaye i-smartphone iqala ukukhala ngesilumkiso. Umlinganiswa ophambili ufikelela kwimfumba yeendiza afumane i-iPhone.
Lo umsebenzi Kubalulekile ukubonisa unxibelelwano phakathi kwezixhobo zombini. Ukusebenza ngokufanelekileyo, kubalulekile ukuba i-iPhone isondele ukuqinisekisa ukuba idibanisa kwi-Apple Watch. Ukuba awukufuphi, ungaya ku-ICloud.com kwaye uzame ukudlala isandi ukude ngaphandle kokuba iwotshi ikufutshane. Ngalo msebenzi umsebenzisi unolawulo lwezixhobo zakhe ukuba zilahlekile. Isibhengezo esibonisa imeko yemihla ngemihla ukuba nawuphi na umsebenzisi angaphinda-phinda ngeveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple ibalaselisa unxibelelwano phakathi kwe-iPhone kunye ne-Apple Watch kwintengiso yayo entsha
Izinto zeNanoleaf, indalo iza ekukhanyiseni okuhle